पत्रकार शालिकराम आत्महत्या प्रकरण विवाहेतर सम्बन्धको भित्री पाटो – POKHARA TOURISM NEWS
HomeNewsपत्रकार शालिकराम आत्महत्या प्रकरण विवाहेतर सम्बन्धको भित्री पाटो
पत्रकार शालिकराम आत्महत्या प्रकरण विवाहेतर सम्बन्धको भित्री पाटो
फोटो शालिकराम पुडासैनीको फेसबकबाट
अस्मिता र शालिकरामबीचको सम्बन्धका नयाँ तथ्य फेला परेका छन्
भाद्र ७ काठमाडौं :
ओखलढुंगाको रावादुलु गाउँपालिकाकी ५५ वर्षीया नीलकुमारी कार्की महाराजगन्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा उपचाररत छिन् । सुरुमा आएको हल्का ज्वरो बन्दै गएपछि साउन पहिलो साता उनी छोराछोरीले बोलाएर काठमाडौं आइन् ।
चिकित्सकहरूले उनलाई निमोनियाँ बिग्रिएको बताएका छन् । आठ सन्तानमध्येका माइँला छोरा जगत झन्डै एक महिनायता उनको हेरचाहमा खटिएको खटियै छन् । अस्पताल भर्ना भएकै दिनदेखि नियमित कुरुवा बस्दै आएकी अस्मिता भने पछिल्ला आठ दिनयता बिरामी आमा भेट्न अस्पताल सम्म जान पाएकी छैनन् । पाऊन् पनि कसरी ? हठात् आइपरेको अनौठो परिस्थितिको बन्धनमा परेकी अस्मिता साउन ३० यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको थुनुवा कक्षमा छिन्  भन्ने कुरा जनकराज सापकोटा ले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
घटनाबारे अनेक तथ्य, भ्रम र हुने, नहुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेकोबारे पनि जगतले धेरथोर थाहा पाएकै छन् । ‘यस्तो पनि हुन्छ भन्ने के कल्पना थियो र रु’ आमाकै उपचारमा निरन्तर अस्पताल र डेरा गर्दागर्दै थाकेका उनले सुनाए, ‘यता आमाको बिमारमा सुधार छैन । उता बहिनीको अवस्था त्यस्तो छ । कति तनाव छ, कसरी भन्नु रु’ बहिनी र शालिकरामबीच गोप्य एसएमएस कसले र किन सार्वजनिक गरेको हो भन्ने प्रश्न पनि उनले गरे । ‘अनुसन्धान चल्दै गर्दा गोपनीयताको ख्यालै नगर्ने काम भयो, उनले भने ।
अस्मिता थुनामा परेको एक साता बितिसक्दा पनि आफूहरूले आमालाई केही थाहा नदिएको उनले जानकारी दिए । ‘आमालाई कडा औषधि चढाइएको छ । बेलाबेला मात्र ब्युँझेर कुरा गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अनि अस्मिता खै भन्नुहुन्छ । हामीले ड्युटीमा छे भनेर ढाँटेका छौं ।
कान्तिपुर कर्मी पत्रकार जनकराज सापकोटा ले अगाडी लेख्छन् निम्न मध्यमवर्गीय परिवारकी आठ सन्तानमध्येकी एक अस्मिताले एसएलसी पास गरेपछि सुनसरीको इनरुवास्थित एक कलेजबाट तीनवर्षे नर्सिङको प्रमाणपत्र तह पढेकी थिइन् । पढाइ सकिएपछिका केही महिना उनी गाउँ गई बसिन् ।
सम्बन्धको एकाध महिनापछि नै शालिकरामले अस्मितालाई बिहे गर्न दबाब दिएको देखिन्छ । उनीहरूबीच फेसबुक म्यासेन्जरमा भएको कुराकानीमा शालिकरामले कोर्ट म्यारिज गर्न अस्मितालाई बारम्बार दबाब दिँदै अनेक घुर्की लगाएको पाइन्छ । चैत ७ मा शालिकरामले अस्मितालाई लेखेका छन्, ‘सुन त, कोट म्यारिज गर्नी ल भोलि वा पर्सि । हुन्छ कि नाइँ  ? उनले यो म्यासेजमा आफूसँग रवि दाइ रिसाएको उल्लेख गरेका छन् ।
आफ्ना दाइहरू पनि अविवाहित रहेको र आफू पनि खुट्टामा नउभिइसकेको भन्दै अस्मिताले तत्काल विवाह गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहेकी थिइन् । शालिकरामले कोर्ट म्यारिज नै गर्न दबाब बढाइरहे पनि अस्मिता सशंकित देखिन्छिन् । तर शालिकरामले निरन्तर उनीमाथि कोर्ट म्यारिज नगरे जे पनि हुने भन्दै दबाब दिइरहन्छन् ।
चैत ९ र १२ मा पनि शालिकरामले अस्मितालाई बिहे गर्न दबाब दिएका थिए । चैत १२ को म्यासेजमा लेखिएको छ, ‘आज पनि भन्छु, विवाह गरौं । जेजे हुन्छ सब म गर्छु ।
शालिकरामले भने बारम्बार आफू रविसँग काम गरेको भन्दै आफ्नो ओज देखाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । उनले माघ २९ मा रविसँग आफूले गरेको म्यासेजको स्क्रिनसट भन्दै अस्मितालाई एउटा फोटो पठाएको देखिन्छ । उक्त स्क्रिनसटमा शालिकरामले लेखेका छन्, ‘दाइ मलाई माफ गर्नुहोला । तपाईंहरूले अफिसमा मलाई सधैं जिस्क्याउने मान्छेले मलाई धोका दिएकी छ दाइ ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त स्क्रिनसट धमिलो देखिन्छ । त्यसमा उनले आफूहरूको सम्बन्धबारे ‘सिधा कुरा जनतासँग’ टिम जानकार रहेको संकेत गरेका छन् । आफूलाई खोज्न प्रयास नगर्न भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘धेरै कुरा सोचेर मन बुझाउन सकिनँ दाइ ।
शालिकरामको आत्महत्यापछि किन न्युज२४ ले बारम्बार अस्मिताको अन्तर्वार्ता गर्ने प्रयास गर्यो  ? के त्यसमा रविको कुनै भूमिका थियो  ? यसबारे भने केही तथ्य खुलेको छैन ।
नोट : भाद्र ७, २०७६ मा प्रकाशित कान्तीपुर डेली डट कम मा पत्रकार जनकराज सापकोटा द्धारा लेखीएको समाचार जस्ताको तस्तै साभार गरएिको छ ।